Oduu Gaddaa: Gazexeesituu Gennet Abdiisaa
Posted: Caamsaa/May 2, 2011 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (8)
Seenaa Aaadde Gennet Abdiisaa
Seenaan obboleettii jaalatamtuu kanaa ganna 40 dura magaala Najjootti jalqabame. Genniin, haadha ishee Aadde Muluu Biiftuu fi abbaa ishee Obbo Birhaanuu Abdiisaa irraa, Amajjii gaafa sadetti, bara 1971 tti, Godina Dhiha Oromiya Wallagga keessa kan jirtu magaalaa Najootti dhalatte. Hanga umirii jahaatti achuma Najoo keessa turtee, booda irra maatii ishee wajjin, bara 1977 keessa, gara magaalaa Naqamteetti godaante. Barnoota ishee ijoolummaa Mana Barnootaa Sadarkaa Duraa fi Lammaffaa Naqamteetti Naqamtee erga barattee boodaan.
Bara 1989 keessa Finfinneetti godaantee, General Winget Techinical School iddo jedhamutti barchuudhaan, Oguma Waa Ijaaruutti eebbifamtee bara 1991 tti Diplomaa argatte.Osoodhuma Wingetitti barachaa jirtuu, Aadde Gennin bara 1990 keessa, akka gaazexessituu dhuunfaatti, leexaa ishee turte Sagalee radio Itoopia keessatti, hojii jalqabde. Sagantaa Afaan Oromoo keessatti, keessumsiiftuu “Qophii Ijool” taatee hanga bara 1991 tii hojjette.
Aadde Genniin nama obsa fi ogumaan badhaate waan taateef, Dhaabbata Televiishena Itopiyaa keessatti fudhatamuudhaan, Onkoloolessa, 1991 keessa sagantaan Afaan Oromoo akka jalqabamuuf gumaacha kan godhan keessa ishe tokko taate. Sagantaalee jaalatamoo fi yoom iyyuu hin irranfatamne, kan akka “Dhangaa” fi “Uummatni Maal Jedha?” jedhu qopheessituu, dhi’eesituu fi gabaastuu ta’uu dhaan sadarakaa gara garatti hojetaa turte. Akka gaazexeessituu Televishenaatti kan gumaachaa turtetti dabaltee, Aadde Genniin sagantaa radio “Sagalee Misiraachoo” jedhu keessatti of kennuudhaan, tajaajjijila kan turte yemmuu ta’u, akkasumas filmii waa’ee Yesus mu’lisu keessaattis mariyaamiin taatee sagalee ishee bareedaa sanaan seenessuun dhugaan wangeelaa namoota miliyoona hedduu bira akka gahuuf gummacha gudaa gooteetti.
Bara 1997 keessa, abba manaa ishee Obbo Tewodros Gamadaa wajjin wal baranii bara 1998 keessa magaalaa Finfinnee Oromiyaa keessatti wal fuudhan. Bara 1999 tti as Ameriikaatti waliin godaananii, magaalaa Minneapolis keessa qubatan. Aadde Genet osoo hedduu hin turin hawwii milkoomina jireeya ishee fi maatii ishef qabduu bakka ga’uuf barnootni ulagaa isaa duraa ta’u isaa dursitee kan hubate, akka dhufteen koolejii seenuudhaan daandii ittiin namoota biraas gargaartu kan saaquuf, oguma neersummaa barachuutti bobbaate. Akka haadhaa fi akka haadha-manaatti ba’aa irra jiru baachaa, Aadde Genniin barnoota neersummaa LP bara 2005 keessa fixxee, bara 2007 keessa immoo Associate Degree Neersummaa ishee fudhatte.
Genniin akka neersiitti, warra dhukkubsatanii waldhaantu fi warra isaaniif gara ho’eettii turte. Gara-lafinni ishee fakkeetti hin qabu. Kanaafis, xalayaalee hedduun galataa fi nama namaa yaadu tahuu ishee ibsanii, warra isheen waldhaanaa turte biraa mana isheetti ergamaafii turan, ragaa guddaadha. Kunis, warra wajjin hojjettu biratti madda jaalalaa fi kabajaa horeeraaf. Akka isheen daftee fayyituuf hawii isaanii kaardii irratti barreessanii kan ergaman keessaa torban dabre kan isheen argatte tokko akkas jedha: “Akka ati fayyina argattu fi maatiin kees atis nagaa argataniif isiniin kadhadha. Gennet, ati dhugumatti biyya lafaa kanaaf akka haadhaatti, haadha-manaatti fi nersiitti eebba dhugaa dha. Jabinni kee fi hawwi-gaariin kee nu hundumaaf kakaasaa dha,” kan jedhu ture.
Aadde Gennet Abdiisaa, ganna tokko fi walakkaaf jagnummaa fi jabina guddaan kansera wajjin qabsoo gochaa turtee, umirii 40 xiqqaa kanaan gaafa Facaasaa galgala lixa aduu Caamsaa 26, 2011, Hospitala Aboot keessaatti harka laattee obbaafatte. Namoota ishee mararfatan, abbaa-manaa ishee, Obbo Tewodros Gammadaa, ijoollee ishee xoxobbee sadan, Milkii, Isaam fi Mi’aa Gammadaa, haadha ishee Aadde Muluu Biiftuu, obboleettota ishee arfan, adaadottan ishee fi maatii fi hiroyyota hedduu dhiiftee Aadde Genniin umirii gabaaba kanaan godaanuun ishee, lammii ishees dabalatee, naasuu fi rifaatii guddaa itti galchee jira. Haa ta’uu malee, umirii gabaaba kana keessatti kan isheen raawwatte immoo gaddaan utuu hin tahin, dinqisiifannaa fi kabajaa guddaadhaan isheef yaadanna.
Nu biraa adeemuun Obboleetti mararfamtuu kanaa maatii fi hawaasa keenyaaf hiri’ina guddaa dha. Waan ishee ittiin yaadannu waan hedduu nuu dhiiftee adeemtee jirti. Gennin, haadha-manaa jaallatamtuu, haadha ho’ituu, hiriyyaa fi obboleetti gara-laafettii turte. Bara jireenya isheetti akka wal jaallannu, akka wal kabajnu fi akka walii yaadnu nu barsiiftee godaante. Waaqayyo jireenya barabaraaf ishee haa simatu. Nu warra isheen itti hir’atteef immo madda jajjabinaa nuuf haa ta’u.
May 2, 11 at 8:50 am
gadda guddaa natti dhagahama gaarii lafti baachuu dadhabuunse egaa maal godhu miti waaqayyo matii ishiitiif firootashee ha jajjabeessun jedha dhaamsin qabus aadde ganniin umurii xiqqoo qabdu keessatti seenee hamma kana hojjettee darbuun shee baay’ee kan nama boonsudha maaloo saba koo nus hamma humna keenyaa waannurraa eegamu hamma lafa kanarra jirrutti hojjennee ha darbinu maaloo gaafa duunu seenaan keenya dhalatee umurii hamma kana jiraatee du’e akka nuunhin jedhamne
May 3, 11 at 3:15 am
Obboleetikeenya kanaa biyyoon itti haasalpatu. Lubuu ishees rabbi nuuf haamaaru jeena.Nagaatti.
May 3, 11 at 6:34 am
Oduu gaddaa kun nama rifachiisa. haadha daa´ímanii, umriin shee ijollee kan taatee lammii teenya dhabuun nagadsiisa., Maatii shee, ijollee shee abbaa warraa shee kessattu harme shee jajabaadhaa waaqayyoo siin haa jabessun jedha.
May 3, 11 at 7:26 am
Obboleetti dandeettii guddaa qabdu akkasii dhabuun baayyee gadda guddaa dha. Hojii isheen sagaleeshee miidhagaa sanaan uummata ishee bo’arsaa turte sun yoom iyyuu hin irranfatamu.
Waaqayyo lubuu ishee hamaaru.
Far. Addisuu Qana'aa
May 4, 11 at 8:09 am
Dhugumaan obboleettiin keenya nu biraa deemuu isheetiif baay’ee gadda guddaatu nutti dhagahama. Waaqayyo lubbuu ishee haa maaru jechaa, firoota ishee maraaf, lammiiwwan ishee fi kanneen jaalala isheen itti argisiiftee fakkeenya gaarii ta’aafii turtee barnoota jireenyaa irraa baratan maraaf jajjabaadhaa jedha. Waaqayyo inni ilmaan namootaa mara uume hojii hojjete hundumaatti egaa sirriidha, murtoo kennu marattis qajeelaa fi dubbii dubbatettis qullaa’aa waan ta’eef sodaa isaa keessatti haa jajjabaannu jedha.
May 6, 11 at 4:36 am
Gadda guddaadha ! Maatii Gannii fi Firoottan akkasuma Oromoo hunda Waaqayyoon guddaan obsa isiniif haa laatu, Ganniis Waaqayyo gaafii itti xiqqeessee bakka qabbanaa isii haa kaa’u. Hedduu nama gaddisiisa…Gannii bakka isiin jirtu osoo hin beekne du’a isii dhaga’uun rifaatuu guddaadha.Yeroo barreefama seenaa gaddaa kan Ganniiudhaa yoon argu qaama koottu na suukannaa’e. Barri dhaloota keenyaatis tokko, barri Mana Barumsa General Wanget seenuudhaa jedhamee barreefamees tokko,Barri biyya ambaa itti baanees tokko,eega baanees Ilmaan argannees isiinis 3 …aniis Ilmaan 3 qabna. Maqaan Ilma isiidhaan tokko milkiidha kan ilma kiyyaatiis Milkii dha. Kuni raajii guddaadha ! Gannii waliiniis barachuu baannus beekkomsa fagoodhaa odeessaan nama wal beekuudha. Seenaa gaddaa akkanaa dhaga’uun kiyya gadda guddaadha. Hundaafuu karaan nama hundaa booddeen kanuma..Aameen jennee fudhachuu qabna. Maatii fi Firoottan akkasuma warroonni isii beektan walumaan Waaqayyo obsa nuuf haa kennu.
May 7, 11 at 12:09 pm
Mee Facebook Kana Irratti Maqaa Kana Galchaati ILaalaa Naga’e Magarsaa
Jun 30, 11 at 1:27 pm
Genikoo you are missed greatly, I still can’t believe yo are gone.
God be with your lovely kids and family